Ny podilin'ny pendulous ny lamaody - long, short and midi eo ambany lohalika, kavina sy hoditra, mahaleo sy lacy, misy tavy ambony, basques, ho feno.
Tsy mihetsika ny fironana amin'ny lamaody maoderina, maneho ny fahavitrihany isan-taona. Ary indraindray, ny fiovana haingam-pivoarana mahavariana dia mitarika ho amin'ny fisafotofotoana, ary olona mahafinaritra. Na izany aza, misy zavatra tsy mihoatra ny fe-potoana. Ary ohatra iray mamirapiratra toy izany dia pensilihazo pensilihazo.
2017 pensilihazo pensilihazo - lamaody lamaody
Ny endrika hentitra dia tsy mitaky fahalalahana amin'ny taona noho ny fanatsarana sy ny fahaiza-manao. Na izany aza, ny mpahaikatr'izy ireo dia nahavita nampifanaraka ny fironana moderina sy ny kilasy. Ankehitriny, io tarehimarika io dia mifanaraka amin'ny lafiny rehetra ary tsy mifidy tahaka ny teo aloha, na dia folo taona lasa aza amin'ny fifantenana ny Accessories, kiraro ary fanandramana amin'ny combinations. Ny akanjo pensilihazo 2017 dia mampiseho ny fanovana sasany amin'ny famolavolana modely nentim-paharazana, ny lamaody indrindra amin'izany dia ireto vahaolana manaraka ireto:
Asymmetry . Ny tsipika tsy mahazatra dia manala tanteraka ny fanetren-tena sy ny tsy fahampian-tsakafo. Eo amin'ny lamaody, manjelatra ny kobaka sy ny karazan-tsilo rehetra.
Drapery . Ny fitaovana ampiasaina sy ny rivotra asymmetrika dia nanjary vahaolana maoderina iray hafa hanalavirana ny fahatsorana sy ny famehezana ny fomba.
Kitapo marevaka tsara ho an'ny fofona . Tamin'ny famaranana farany dia nisy toerana manan-danja nalain'ny modely tamin'ny fofona fofona. Ny tombontsoa lehibe amin'ity safidy ity dia ny faka voajanahary sy ny habetsaky ny habeny, izay azo alaina amin'ny endrika hafa.
Fomba fohy . Ny endri-tsarobidin'ny akanjo henjana dia noheverina ho lafy tsara foana. Na izany aza, nandritra ireo taon-jaza vao haingana, ireo mpahaikitra dia nanampy ny firaisana ara-nofo amin'ny singa ao amin'ny orinasa fandraharahàna , mampiakatra azy ireo amin'ny mini-attraction.
Polisy mahazatra pensily
Tsotra amin'ny fomba fijery voalohan'ny laconic dia afaka mampifanaraka ny tarehiny amin'ny fomba mahaliana sy amim-piraiketana azy, hanomezatra azy io sy ny firaisana ara-nofo. Ho an'ny safidy mahomby amin'ny lanjany lehibe dia ny fitaovana, ny famaranana ary ny halavany. Na izany aza, ny fanontaniana manan-danja sy manan-danja dia ny fisafidianana ny fananganana. Ny volo malaza indrindra amin'ny pensilihazo ankehitriny dia aseho amin'ny vahaolana toy izany:
Loko tsotra . Ny loko mainty na fotsy dia universal ary mifanaraka tanteraka amin'ny akanjo rehetra. Fa raha misafidy ny safidy amin'ny akorandriaka mainty sy fotsy ianao, dia afaka mampitombo na manitatra ny valabavim-borona, manampy ny rantsam-batana, manitatra ny fitomboana.
Sarom-bolo marevaka amin'ny endriky ny pensilihazo . Ny loko mifanohitra no mampiavaka ny akanjo ny singa fototra amin'ny sary. Amin'ny lamaody, loko misy loko tokana - manga, mena, mavo, maitso ary hafa.
Prints . Ny sary mahafinaritra sy ny abstractions dia azo antoka fa hisarika ny saina ho amin'ny safidy maotina. Ao amin'ny fironana, loha-hevitra floral sy geometrika, tranomangidy anglisy, fiovan'ny gradiente sy firavaka.
Pastel manarona . Tsy afaka manamaivana ny halemem-panahy sy ny fitiavan-tanindrazana amin'ny tazom-peo mazava amin'ny palette manga sy manga ianao. Ny romantika sy ny lamaody, ny sary dia manampy tsimoka, mint, lavender, nude .
Ny fironana malaza amin'ny famoriam-bola vao haingana dia ny modelim-bolo. Ny vokatra denim dia fampihetseham-batana, manolo-tena ary manintona amin'ny fomba. Ny vahaolana modely dia kavina lava, mameno amin'ny endriny mahafinaritra - ny lavaka, ny fofona, ny varenka vokatra, ny tsy mitoka-monina ny sisiny amin'ny sifotra tsy misy dikany. Na dia izany aza, ny loko marevaka sy laconic ny loko maizina dia tsy namoy ny fahalalany, indrindra ho an'ny tsipìka tsy mahomby. Safidy lehibe iray dia akanjo lava pensily lava. Ny mpanamboatra dia manolotra vokatra sy modely iray amin'ny môtô manerana ny lavany.
Polisy hoditra hoditra
Aza hadinoina ny vokatra azo avy amin'ny firaisana ara-nofo na ny hoditrao. Tamin'ny faran'ny fizarana farany dia nanipika ny fanao amin'ny akanjo toy izany ny mpanatonta, manolotra modely ho an'ny fotoana rehetra. Ny lamaody farany indrindra dia ny pensilihazo mainty hoditra. Indrindra indrindra rehefa manintona ny loko mainty dia ny vokatra varnished. Ny akanjo henjana dia ny safidy tena ilaina amin'ny andro mangatsiaka. Ny safidy iray hafa ho an'ireo izay tia textured materials dia ny hoditra misy loko na tadidy. Ary ny modely loko dia hanampy amin'ny fanamafisana ny tapa-kevitra , ny herisetra ary ny toetrany.
Ny akanjo vita amin'ny volony elastic dia malaza amin'ny fotoana rehetra. Ny pensilihazo pentina vita amin'ny pensilihazo vita amin'ny kofehy vita sokitra dia manavaka amin'ny fitaovana iray misy rafitra tsara. Ny endriky ny hazavana ao am-patana dia matetika tsy misy fantsona, izay manome sary mahazatra sy azo ampiharina amin'ny hafanana. Amin'ny toetr'andro mangatsiaka, ny tapa-doko dia heverina ho tena izy. Ny fahatanterahana ny kiraro dia ny fahafahany mifandray amin'ny vatana, manindry ny firaisana ara-nofo sy ny toetrany. Mandritra izany, ny akanjo dia manome fahafahana malalaka ny hetsika, izay manan-danja amin'ny akanjo mavitrika isan'andro. Ny mody mody hentitra dia lasa vahaolana tsara ho an'ireo vehivavy lamaody ao amin'ilay toerana.
Ny tsara tarehy indrindra sy ny vehivavy dia karazan-tsakafo mihetsiketsika. Ny pensilihazo amin'ny dantelina dia hameno tsara ny fomba amam-pihetseham-po isan-andro na ho lasa vahaolana kanto amin'ny làlana hivoaka. Ireo mpanamboatra dia manolotra modely tsy hoe midi-mandidy, fa maika maika ihany koa. Ny vahaolana tany am-piandohana dia ny rivotra asymmetrika tsy manam-piavonan'ny hem, manamafy ny kisary motifs. Ao amin'ny fironana amin'ny vokatra avy amin'ny lamba voavolavola tanteraka. Fa ny dantelina ihany koa dia afaka manamboatra ny endriny - mangarahara mangarahara, mandondona amin'ny sisiny, applique.
Kofehy pensily lehibe indrindra
Nahazo tombontsoa be dia be nandritra ny vanim-potoana maro lasa izay, mbola mijanona any an-dalam-pandrosoana mandraka androany ny modely henjana henjana. Ny vahaolana toy izany eo amin'ny famolavolana dia manan-danja amin'ny vokatra rehetra - denim, kiraro, fitaratra, dantelina ary hafa. Ankoatra ny fanatsarana sy ny fahamendrehana, izay mampiavaka ny akanjo marevaka malaza, ny akanjo toy izany dia manitsy tsara ny fahalemen'io endrika io - tsy fisian'ny tavy, mihoatra ny santimetatra ao amin'ny kibony, teboka kely.
Takelaka kisily amin'ny baskety
Ny fanampiana faran'izay manan-danja amin'ny singa kanto ao amin'ny orinasa fandraharaham-barotra dia fehiloha lehibe eo amin'ny tavy. Ny mpanamboatra dia manolotra vahaolana mahaliana miaraka amin'ny Basque Basque izay afenina sy mafy. Ho an'ny lamaody maoderina sy malefaka, ny safidy tena izy dia podilin'ny penina eo ambany lohalika. Ny ankizivavy stilistes kely dia tokony hipetraka amin'ny fomba fohy. Ny fironana vao haingana dia manondro fa ny Basque dia afaka mameno ny akanjo henjana tsy vitan'ny tavy fotsiny, fa amin'ny sisin'ny lamosina ihany koa. Amin'io endritsoratra io, ny akanjo dia samy manana endrika samihafa, izay matetika no misafotofoto amin'ny taonan'ny taona .
Raha liana amin'ny safidy azo ampiharina sy azo ampiasaina ianao, dia ny vahaolana tsara indrindra no modely, ampiana paompy kely. Ny Accessories dia afaka miafina na faktiora. Mahaliana ny mijery ireo vokatra miaraka amin'ny famaranana ireo karazana roa ireo amin'ny fotoana mitovy. Amin'ny pensilihan-kiraro mena-midi miaraka amin'ny pesta mamitaka. Ity safidy ity dia matetika hita ao amin'ny fanangonana ny orinasa fandraharahàna, izay tsy ahafahana manamboavina zavatra hafa.
Pencil skirt amin'ny vehivavy feno
Raha mbola manafina ny endrika tsy mety ataonao ianao ao ambany akanjo marevaka sy mofomamy, dia misy akanjo marika pensilihazo ho an'ny feno dia ny safidy manan-danja izay hanampy amin'ny fanovana ny sarinao , miala amin'ny renibeny goavambe ho an'ny zazavavy tsara tarehy. Mba hisorohana ireo tsy fahampiana, ny volo fotsy hoditra mainty hoditra dia vahaolana handresy. Ny tandroka na baskety nohavaozina dia hamily ny sain'ny olona mihoatra ny santimetatra amin'ny kibony. Ny fatorana lava eo ambanin'ny lohalika dia hanafina ny vala feno, manitatra ny fitomboana sy ny fahasoavana.
Amin'ny fomba maoderina, ny fomba hentitra dia heverina ho safidy manerantany amin'ny akanjo, izay hita amin'ny fitambarana izay mety. Ny tena malaza dia ny fivarotana sy ny tsipika amboara. Na izany aza, ny fahagagana sy ny fomban-drazana dia mampiseho ny Kazhual sy sary an-tanàn-dehibe miaraka amin'ny pensilihazo pensilihazo. Ao anatin'ireo antokom-bavaka tsara tarehy dia manavaka ireo singa tsara indrindra ao amin'ny garderobe ny stylists:
Tavy fotsy na akanjo . Ny tara-pahazavana dia vahaolana mandresy amin'ny birao. Na izany aza, miaraka amina teboka mamirapiratra, ny lobaka fotsy na ny akanjo mavokely dia hampitombo ny fitiavany ny tsipika isanandro.
Crop top . Ny ombidia mivelatra dia hahatonga anao ho sexy sy mahatsiaro. Ny tsena maoderina dia manolotra avy hatrany ny kifety ambony sy ny zipoitra henjana .
The jacket . Amin'ny toetr'andro mangatsiaka na amin'ny dian-tongotra, ny jaketa dia tsy ho singa iray fanampiny. Ny fomba mahazatra ao amin'ny faritra ambany dia mamela ny safidy amin'ny jirobe - classic, short, romantic, hoditra ary hafa.
Posy Ny volo maimaim-poana tsy misy endriny mahazatra dia hanasongadina ny fifehezana sy ny endriny ambany. Ny panty dia azo atao amin'ny akanjom-bovoka na mipetrapetraka.
Karazana kiraro manao akanjo pensily?
Ny zava-dehibe ao anatin'ilay antoko miaraka amin'ny singa henjana ao am-pandriana dia ny fahatanterahany. Raha ny marina, kiraro fotsiny ihany ary afaka mamaritra ny endrika tena izy amin'ny sary. Ankoatra izany, ny akanjo fanampiny dia tompon'andraikitra kokoa amin'ny fampiononana sy ny fialana. Ary ankehitriny, ireo stylista dia manavaka ireo vahaolana tena izy:
Boats na kiraro baskety . Ny Classics dia mijanona ho ny fahombiazana faran'izay tsara sy mahatalanjona. Miaraka amin'ny sambokely sy baolina sasantsasany, ny akanjo lava be dia be dia be-jiro pensilihazo, midi-fantsona, maki-elegant. Amin'ny vanim-potoana mafana, azonao atao ny manolo kiraro tsy tapaka miaraka amin'ny kapa amin'ny kiraro.
Keds na tennis . Ny iray amin'ireo vahaolana malaza indrindra amin'ny fananganana lamaody dia fanatanjahan-tena sy malaza. Noho izany, ny antokon'ny pensilihan-doko tsy miova amin'ny kiraro, kiraro na slipknots dia safidy malaza, izay mety ho an'ny kiraro mavitrika.
Sandale eo amin'ny lampihazo . Ireo kiraro ireo dia manan-danja indrindra ho an'ireo vehivavy manana haavo maotina. Ara-drariny ho an'ny modely - sehatra boribory, traktera, fifangaroam-paty sy kiraro, na kiraro aza.
Sandals Valentino misy tselatra
Park miaraka amin'ny volon'osy
Jeans miaraka amin'ny tarika elastic
Miakanjo miaraka amin'ny fanaovan-jiro
Dresses ho an'ny vehivavy 50 taona
Kiraro mainty hoditra
Pikantsary mitafy - ireo modely modely sy tsara indrindra
Kiraro marevaka - 78 sary ireo mpivady lamaody sy tsara ary inona no tokony hampiarahana azy ireo?
Ny akanjo maitso hariva dia safidy lamaody
Tkemali avy amin'ny cherry plum - recipe
Ny kitapom-baton'ny vehivavy - ny tanora tsara indrindra sy ny modely an-tanandehibe ho an'ny vehivavy ankehitriny
Lithotripsy amin'ny vato voa
Afaka mahazo vohoka ve aho aorian'ny fiterahana ahy?
Fanafody fitsaboana tricyclique - lisitry ny zava-mahadomelina
Afaka miasa amin'ny fiakarana ve aho?
Ahoana no hanadiovana ny vavony ao anatin'ny 3 andro?
Bella Hadid dia hamorona tahiry mifandraika amin'ny marika Chrome Hearts
Prasitel ho an'ny alika
Vishnevsky manitra miaraka amin'ny hemorrhoids
Fanaterana vao haingana amin'ny herinandro 26
Recipe ho an'ny marinade ho an'ny kisoa